Stainless Steel lalamby Design
Safidy fampitaovana: stainless 304 ho an'ny fampiasana anatiny, 316 ho an'ny fampiasana ivelany;
Haavon'ny lalamby: 36 ″, 42 ″ na azo amboarina;
Safidy ambony amin'ny lalambe: endrika boribory na toradroa amin'ny vy vy, akora vita amin'ny hazo;
Sodina mitsivalana / tsorakazo: 3 pcs / 4pcs / 5pcs / 6pcs / 7pcs / 8pcs ho an'ny fehezam-boninkazo sy fehezan-dalàna isan-karazany.
Fametrahana tsotra, famaranana matanjaka, fitoniana maoderina.
ACE Rod Railing, ny fomba hafa mahomby amin'ny tariby tariby, dia manova ny fomba fisainantsika ny rafitra lalamby maoderina.
Rod Railing dia manana ny hakanton'ny tariby tariby tsy misy fikarakarana, ary safidy maharitra ho an'ny fampiharana anatiny sy ivelany.
Ny vidin'ny rafi-byo dia hofaritana amin'ny haben'ny velarana ilainao, ary koa ny safidy farany nofidinao.
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, dia mamokatra any amin'ny toeram-pambolena any Foshan, Sina ny rafi-byo. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny ampahany vy dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Afaka nanao izany marimarina kokoa isika satria mifehy ny fizotran'ny injeniera ho an'ny rafitra iray manontolo, ary mahatonga ny fizotran'ny fametrahana ho asa tsotra.
Teo aloha: Volon-jiro vy avo indrindra amin'ny toeran'ny Glass
Manaraka: Decking Steel Steel Stainless Steel
Rafitra fanaovana vy vy
Stainless Steel tohatra tohatra
Stainless vy dingana lalantsara
Tohatra vy tsy misy tohatra
Decking Stainless Steel Baluster Wire Cable Rai ...
Fandroana fitaratra filomanosana fitaratra filomanosana vera ...